ओलीले फोन गरे भनेर विवादमा आएकी करिष्माले आफैंलाई भनिन् महानायिका! - Dainik Online Dainik Online
ओलीले फोन गरे भनेर विवादमा आएकी करिष्माले आफैंलाई भनिन् महानायिका!
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७८, बुधबार ४ : ०९
नेपाली समाजमा यतिबेला नेपाली सिनेक्षेत्रका ‘महानायक र महानायिका’ को हो भन्ने विवाद कलाकर्मीबीच चलिरहेको छ। राजेश हमाललाई सबैले महानायक भनेर चिन्छन् तर केही कलाकारको फरक मत छ।
हालै पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठले आफूलाई भुवन केसी महानायक जस्तो लाग्ने बताएका थिए। यसअघि हास्य कलाकार दीपाश्री निरौंला राजेश हमाल महानायक होइनन् भन्दा आलोचित बनेका थिए।
उनले रुँदै राजेशका फ्यानसँग माफी नै माग्नु परेको थियो। यस्तै सिनेक्षेत्रको महानायिकाको विषयमा पनि त्यस्तै खाले विवाद छ। शिव श्रेष्ठले भुवन केसीलाई महानायक मान्ने र गौरी मल्ललाई महानायिका मान्ने बताएका थिए।
रमाइलो के छ भने केही समय अगाडि मात्र आरके इन्टरटेनमेन्ट ग्रुपले उसको बिसौं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नायिका करिष्मा मानन्धरलाई महानायिकाको उपाधिबाट सम्मान गरेको थियो। आज भन्दा एघार वर्षअघि आफ्नो नवौं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यही ग्रुपले नै राजेश हमाललाई महानायक बनाएको थियो।
करिष्मा मानन्धरले हालै कक्षा १२ को परीक्षा दिएकी थिइन्। उनले आफूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेको भन्दै स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेपछि उनी विवादमा फसेकी थिइन्। त्यहाँ ओलीले नभएर ओलीलाई उनले फोन गरेको देखिएको थियो।
यसबीचमा उनले एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफैंले आफैंलाई महानायिका भनेर सम्बोधन गरेपछि उनी ट्रोलको शिकार भएकी छिन्। शिव श्रेष्ठले महानायिका गौरी मल्ल हो भनेपछि उनले आफ्नो एक तस्बिरमा ह्यासट्याग महानायिका लेखेकी छिन्।